Ukuhamba Ngesitimela Okuyingozi Ngezivakashi - Ingabe Likhona Ithuba?
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Uhambo lokuzijabulisa » Ukuhamba Ngesitimela Okuyingozi Ngezivakashi - Ingabe Likhona Ithuba?
Uhambo lokuzijabulisa • I-Australia Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • ICanada Breaking News • I-China Breaking News • Ezokuzijabulisa • Industry Hospitality Industry • Izindaba • Izindaba ZaseRwanda • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha
by ISrilal Miththapala - eTN eSri Lanka
I-CN Tower EdgeWalk - Isithombe ngezilokotho ze-cntower.ca
Ibhalwe ngu ISrilal Miththapala - eTN eSri Lanka
Imithombo yezokuxhumana, kanye neminye imithombo yezindaba ejwayelekile bekungamampunge ngaphambi kwenkinga ye-COVID, lapho ezinye izithombe zombhangqwana osemusha wabavakashi zivele zilenga esitimeleni sezwe laseSri Lankan eshiya izitabane, zijabulela umzuzu othokozisayo.
Kube nezimpikiswano ezishisayo ngale ndlela yokwenyuswa kweSri Lanka, abantu abaningi bekhuluma ngobungozi balo mkhuba.
Kwakunokukhathazeka ukuthi kuzoletha ukusakazwa okungekuhle ngeSri Lanka uma kwenzeka okuthile okuyingozi.
Le ngxenye yokugibela isitimela emzileni wezwe elisemaphandleni ngokusobala ingenye yemizila yesitimela ebabazekayo emhlabeni.
Futhi kufanele impela ngakho ngicabanga. Mina ngokwami ​​ngibe yilowo ojoyine ikhorasi eyakhuluma ngokuqinile ngalokhu.
Kodwa-ke ngicabanga ngaphandle kwebhokisi, ngacabanga - Singakwazi ukwenza ithuba lapha?
Okuhlangenwe nakho okusha kanye nezivakashi ezifuna injabulo namhlanje
Akungabazeki ukuthi kunengxenye entsha yokuqonda, encane, isipiliyoni kanye izivakashi ezifuna ukuzijabulisa, okuvelayo nokuhamba emhlabeni wonke. Bayi-savvy ye-inthanethi neyokuxhumana nabantu, befuna okuhlangenwe nakho okuthokozisayo nokujabulisayo, futhi imvamisa bayayazi imvelo. Zivame ukubonwa zihlola amaholidi asezingeni eliphezulu, ahlelelwe ngawodwana ngokuya ngezidingo zawo kanye nalokho akufunayo.
Kuyo yonke iminyaka, isintu besilokhu sicindezela imikhawulo yokuhlola: sinqobile umhlaba, ulwandle nesikhala. Sithole izimangaliso eziningi kuze kube manje ezingaziwa zeplanethi yethu ngokulangazelela ulwazi okungapheli.
Izivakashi azihlukile. Ukuze babalekele impilo yabo yansuku zonke ecindezelayo, bafuna okwehlukile, baze baqonde nasezindaweni ezinobutha noma eziyingozi ukuze bathole injabulo yokutholwa nomuzwa wokuzijabulisa. Alisekho igumbi lehhotela elihlanzekile elinenqwaba yezinsiza, ukudla okuhle, nokukhanya kwelanga okwanele izivakashi.
Ngokwe-bhukuing.com, ukulangazelela okuhlangenwe nakho ngezinto ezibonakalayo kuyaqhubeka nokuqhuba isifiso sabahambi sohambo olungamangalisa nolungalibaleki: ama-45% wabahambi anoluhlu lwamabhakede engqondweni. Amathuba amaningi okuvela ohlwini lwamabhakede yilabo abafuna ukuthakazelisa abafuna ukuvakashela ipaki yengqikimba edume umhlaba wonke, abahambi abafuna ukuya ohambweni lwesitimela oludumile, noma ukuvakashela indawo ekude noma eyinselele.
Ithiyori yokwehlisa idrayivu kwi-psychology ibeka ukuthi umuntu akakaze abe sesimweni sokugcwaliseka ngokuphelele, ngakho-ke, kuhlala kukhona amadrayivu adinga ukwaneliseka. Abantu nezinye izilwane bandisa ngokuzithandela ukungezwani ngokuhlola izindawo ezingaziwa, ukucindezela okuzenzela, nokuphuma ezindaweni zabo zokunethezeka. Lokhu kubanikeza umuzwa wokufeza okuthile kanye nokwaneliseka kwabo.
Ngaleyo ndlela izinjabulo ezingaziwa, ama-adventures nokushesha kwe-adrenaline kudonsela abahambi.
Enzeni amanye amazwe?
Njengoba kushiwo, amazwe amaningi athuthukisa amava ahlukile, angalibaleki, nathokozisayo ekunikeleni kwabo ngomkhiqizo. Zimbalwa zichazwe ngezansi.
Amaqembu amancane ayathathwa ngokuzulazula eduze kwensimbi enkulu yase-arched eyakhiwe eSydney Harbour Bridge. I-360 deg. ukubuka okuvela ebhulohweni, amamitha ayi-135 ngenhla komhlaba, ethekwini, nasendlini eseduze yeSydney Opera, ngenkathi ukuvezwa ngokuphelele yizimo kungokuhlangenwe nakho okungajwayelekile futhi okuthokozisayo.
Enyakatho-ntshonalanga nesifundazwe saseChina iHunan, izivakashi zingahamba ngokukhululeka emgwaqweni onamathele eTianmen Mountain - amamitha angu-4,700 XNUMX ngaphezu komhlaba.
Indlela yokuhamba enezingilazi ingaphezu kwamamitha angu-300 ubude futhi ingamamitha amahlanu kuphela ububanzi, inikela ngesipiliyoni okuthiwa siyajabulisa futhi siyesabisa.
Ukukhanga okude kakhulu eToronto kuvumela abantu ukuthi bame emaphethelweni eCN Tower futhi bancike. Yisiyingi esigcwele kunazo zonke emhlabeni, ukuhamba ngaphandle kwezandla onqenqemeni olunobubanzi obungamamitha ayi-1.5 oluzungeza phezulu kwepod enkulu yeTower, amamitha angama-356, izindaba eziyi-116 ngaphezulu komhlaba. I-EdgeWalk kungukuhlangenwe nakho kwesiginesha saseCanada kanye ne-Ontario Signature Experience.
Izinhlobo ezahlukahlukene zokuhamba eRwanda nase-Uganda zikuvumela ukuba ungene ehlathini ukuze ubuke emehlweni amaGorilla endaweni yawo yemvelo. Kuyisipiliyoni esiyingqayizivele ngokuphelele se-safari yase-Afrika. Lo mzuzu ushiya isithombe esihlala njalo futhi esingenakulibaleka sisondela kakhulu kulesi silwane sasendle esihle kakhulu.
Lezi ezimbalwa nje. Ngakho-ke sekuvele kunezinhlobonhlobo zokuheha okuyingqayizivele, kwezivakashi okujabulisa izivakashi emhlabeni wonke.
Ukuphepha - isimo esidlula esinye
Zonke lezi zinto ezihehayo ezifuna izivakashi futhi ezibonakala ziyingozi zinezinto eziningi ezifanayo ezingakaze zonakaliswe - ukuphepha.
Ukuphepha kubaluleke kakhulu kuyo yonke le misebenzi futhi kungaphansi kokuhlolwa okuqinile nokubuyekezwa ngezikhathi ezithile. Bonke abasebenzi abaqondisa futhi bafundise lezi zivakashi ezifuna injabulo baqeqeshiwe futhi baqeqeshwa kahle.
Noma iyiphi imishini esetshenziselwa ukuphepha njengamahhanisi namabhande okuphepha yakhelwe emazingeni aphakeme futhi ihlolwa ngezikhathi ezithile. Akukho okushiyelwa ethubeni futhi uma kukhona ukufana okuncane okuyingozi ngenxa yezimo zemvelo ezingalindelekile, ukukhanga kuvalwa okwesikhashana. (isb. uma kunemimoya enamandla, ibhuloho laseSydney Harbour liyamiswa).
Izinyathelo zokuphepha ezinjalo ziyisidingo esibalulekile, ngoba noma iyiphi ingozi engalindelekile ingaholela emiphumeleni emibi kakhulu nezimbi yokuqulwa kwamacala nokuvala nokuheha.
Manje kuthiwani ngokuhamba kwethu ngesitimela?
Ukuheha kohambo lwezitimela zaseSri Lankan (kaningi phakathi kukaNanu Oya no-Ella - isigaba esibabazekayo) iqiniso lokuthi izivakashi zingama ebhodini lonyawo lomnyango wezitimela ovulekile futhi zizwe umoya opholile ubhekane nobuso bazo ngenkathi umunca izwe elihle lamagquma namasimu etiye. Lokhu yinto abavakashi abaningi basentshonalanga abakwazi ukuyenza emuva emakhaya, lapho yonke iminyango yezitimela ihamba ngokushesha lapho isitimela siqala ukuhamba.
Eqinisweni ngitshelwa ukuthi abanye abasebenzeli bezokuvakasha e-Australia bacelwa ngokukhethekile izivakashi ukuba babahlelele lokhu, lapho bebhuka uhambo lwabo.
Ngakho-ke kungani ungakhi futhi wenze ukukhanga okufanele kulokhu?
Asikwazi ukuguqula ikalishi elilodwa libe nebhalkoni evulekile eceleni lapho umuntu angama ngaphandle azwe imvelo evulekile? Kungafakwa ojili bokuphepha abafanele futhi umuntu ngamunye angabanjiswa enqoleni ngehhanisi (njengalokho okusetshenziswa kwezinye izinto ezikhangayo lapho ukuxhumana kuvulekele khona ezintweni). Kungakhokhiswa imali ekhethekile ngalolu lwazi.
Isici esisodwa esivuna isici sokuphepha ukuthi ngesikhathi sinqamula le ndawo, ngenxa yokwehla okukhulu, isitimela sihamba ngejubane lomnenke, ngokungafani nakwamanye amazwe lapho isivinini singafinyelela kuma-80-100 kms ngehora.
Lokhu kukhanga kungasetshenziswa njengomkhiqizi wemali eMnyangweni Wezitimela njengoba izivakashi ezifuna ukuzwa lo mnandi zingakhokhiswa imali, isikhathi esithile lapho zingasebenzisa khona lesi sikhungo.
Yize lokhu kungabonakala njengokulula, empeleni kungaba nezindaba ezithile zokulungiswa ezidinga ukubhekwa.
Kepha uma kukhona incwadi yefa, futhi neminyango ehlukene ethintekayo ingalibona lonke ithuba, bese ifinyelela ebangeni elifanayo, isika ubuphathi obuphezulu obuvame ukwenzeka, impela-ke bekungeke kube nzima nhlobo.
Kepha iphuzu lilonke kulesi sivumelwano, ukuthi kufanele sicabange ngaphandle kwebhokisi futhi siqonde wonke amathuba akhona akhona, ikakhulukazi njengoba kancane kancane sivulela izivakashi ngemuva kobhadane. Sijwayele ukubabaza futhi sihlasele ngakho konke ukushiyeka okukhona. Kepha kuningi okusengenziwa uma kunabantu abambalwa abazimisele nabazinikele abangahlangana.
Ezokuvakasha ngemuva kwakho konke empeleni zikhombisa amabhizinisi futhi ngaphandle kokuqamba, i-panache, abalingisi, nobuciko, liyini ibhizinisi lokukhombisa?
ISrilal Miththapala - eTN eSri Lanka